warkii.com » Budhcaddii Xiddigaha Premier League Weerarka Ku Ahayd Oo U Dhacday Guriga Laacib Ka Tirsan Liverpool Iyo Waxyaabaha Ay Ka Qaateen
Budhcaddii Xiddigaha Premier League Weerarka Ku Ahayd Oo U Dhacday Guriga Laacib Ka Tirsan Liverpool Iyo Waxyaabaha Ay Ka Qaateen
Budhcad muddooyinkii dambe u dhacaysay guryaha ciyaartoyda horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa ugu dambayn gudaha u gashay guriga uu deggan yahay xiddiga Liverpool ee Fabinho, waxaanay ka qaateen alaabooyin qaali ah.
Fabinho, xaaskiisa iyo xubnaha kale ee qoyska ee deggan guriga ayaa Arbacadii u baxay kulankii ay Liverpool 5-3 ku garaacday Liverpool, isla markaana ay Reds ugu dabbaal-degtay hanashada horyaalka, halkaas oo looga ogolaaday qoysaska ciyaartoyda kooxda inay si khaas ah u iman karaan garoonka si ay uga daawadaan dabbaal-degga.
Fabinho iyo xaaskiisa
Laakiin xiddiga reer Brazil ayaa markii uu kusoo laabtay gurigiisa waxa uu arkay alaabooyinkii muhiimka ahaa oo laga qaatay iyo tuugtii oo ka baxday.
Booliska daba-gelka dembiyada ayaa bilaabay baadhitaan, waxaana guriga laga qaatay alaabooyin qaali ah oo ay ka mid yihiin dahab, baabuur Audi RS6 ah oo markii dambe laga helay Wigan iyo waxyaabo kale oo muhiim u ahaa Fabinho iyo xaaskiisa Rebeca Tavares, lacag ahaanna qiimo badan ku joogay.
Falkan ayaa la sheegay inuu dhacay Arbacadii intii u dhaxaysay gellinkii dambe ee Arbacadii oo ku beegnayd 3pm illaa 4am ee Salaaddii subax ee Khamiistii oo ahayd xilligii ay Fabinho iyo Rebeca Tavares kusoo laabteen guriga.
Afhayeen u hadlay booliska Merseyside ayaa sheegay inay baadhitaan bilaabeen, waxaanu yidhi: “Ciidamada dembi-baadhista ee Sefton ayaa raadinaya macluumaadka budhcadnimo ka dhacday Formby, halkaas oo booliska laga soo wacay saacadihii hore ee subaxnimadii Khamiista (Thursday, 23 July), markii ay dadka guriga degganaa soo laabteen ee ay ogaadeen in la sii baadhay.
“Qofna ma joogin guriga waqtiga falku dhacay, laakiin waxa loo malaynayaa in tuuganimadu dhacday intii u dhaxaysay 3pm ee Arbacadii 22 July iyo 4am ee Khamiistii 23 July.”
Boolisku wuxuu xaqiijiyey waxyaabaha laga dhacay guriga Fabinho, waxaanu yidhi: “Tiro alaab dahab ka ah ayaa la xaday, sidoo kale gaadhi Audi RS6 oo midabkiisu cawlaan yahay ayaa la qaatay, kaas oo markii dambe laga soo helay deegaanka Wigan.”
Afhayeenka hadlay boolisku waxa uu intaa ku daray in dembi baadheyaashu ay si buuxda ugu hawlan yihiin guriga iyo aagga oo dhan, iyaga oo adeegsanaya kaamirooyinka guriga ku xidhnaa ee CCTV.
Fabinho oo kaliya budhcaddani may bartilmaameedsan, waxaase sannadihii ugu dambeeyey guryahooda loo dhacay tiro ciyaartooyo kooxdan ah xilli ay ku maqnaayeen kulamo kooxdoodu lahayd.
Sadio Mane ayaa gurigiisa gudaha loo galay intii ay socotay ciyaartii Bayern Munich ee Champions League ee xili ciyaareedkii hore, sidoo kale Roberto Firmino iyo Dejan Lovren ayaa iyagana guryahooda la baadhay.